हत्या, बलात्कारको छानबिन गर्न देशमा पुलिश छ , रवि लामिछानेलाई किन हिरो बन्न परेको ? – मुकुन्दे – Your1click
केही वर्षअघि ( ०५८ देखि ०७० ) सम्म सालसम्म रत्नपार्कका रुखमाथि चढेर भाषण गर्दै हिँड्ने मुकुन्दे त्यसयता भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा जोडिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले अाफूलार्इ भविष्यको कार्यकारी राष्ट्रपति दाबी गर्छन् । र, मुकुन्दल्याण्डका जनतालार्इ सुख र शान्तिले बस्न पाउने व्यवस्था अाफूले मिलाउने बताउँछन् । ०३५ सालमा भोजपुरमा जन्मिएका मुकु्न्दे ‘भोजपुरमा मोइ खाएर काठमाडौंमा पिसाब फेर्न आउने’ नेपाल देख्न चाहन्छन् । बुढेसकालसम्ममा कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर मुलुकको अनुहार फेर्ने महत्वकांक्षा सुनाउने मुकुन्देलाई धेरैले पागल ठान्छन् । तर, उनी भने आाफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भएको दाबी गर्छन् ।
आफूलाई वौद्धिक मगन्ते ठान्ने उनी भन्छन् । भोजपुर षडानन्द नगरपालिका ९ खार्तम्छामा उनका नाममा १५ रोपनी जग्गा छ । पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्वमाथि प्रश्न गरी इतिहासको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै हिँडेपछि केही वर्षअघि मुकुन्देलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पागल हो कि भनेर पाटन अस्पतालसम्म पनि पुर्‍यायो । ‘तर डाक्टरलाई चै बुद्धिचाल अर्थात चेस खेलेर जित्न चुनौति दिएँ । त्यसपछि त डाक्टरले परिवारसँग नबुझि केही भन्न नसकिने रिपोर्ट दिए । प्रहरीले पनि छाड्यो ।’ मुकुन्दे भन्छन् ।
यसै बीच अहिले सामाजिक संजालमा चर्चाको शिखरमा रहेको ” युएईमा कार्यरत अष्टमी गुरुङ आत्महत्या प्रकरण ” मा यिनै मुकुन्द घिमिरेले एउटा युटुब च्यानल लाई दिएको अन्तवार्तामा उनले ” सिधा कुरा जनता संग ” कार्यक्रमका कार्यक्रम संचालक , पत्रकार रवि लामिछाने विरुद्द दिएको अभिव्यतिले सामाजिक संजाल फेरी तातिएको छ ! त्यो अन्तर्वातामा मुकुन्दले रविलाई के भनेका छन् त्यस्तो जसले उनलाई हजारौ गालीका वर्षा गराईरहेका छन् ! पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोस् !!
भिडियो तल हेर्नुहोला ,
के पागल नै हुन् त मुकुन्दे? रबिले अाफ्नो अाैकात भुले भन्दै सिकाउन थालेपछि – भिडियो सहित |
← फूलबारीमा हाइकर्सको मेला
Judwaa2– Full Movie →
पुलिसको सानदार जित